Maalinta: Juun 18, 2019
Soo bandhigida MiVue Drive 65 LM Car Camera
Mio MiVue ™ Drive 65 LM camera oo wata abaalmarinta IF Design Award ayaa fududeyneysa inaad ku gaarto halkaad u gaareyso wehelkaaga si buuxda u qalabaysan, iyadoo aan wax qalloocin ah laga dhicin. Ficil ahaan iyo fududahay in la isticmaalo badhanka [More ...]
Hillaac ayaa ku dhacay Bursaray! .. Gaadiidka waxaa bixiya basas
Gaadiidka waxaa la siiyaa gaadiidka baska ee u dhaxeeya Kültürpark-Nilüfer iyo Kültürpark-Karaman Stations sababtoo ah korontada iyo burburinta xarumaha isgaadhsiinta sababtoo ah weerarrada shidaalka ee weerarka cirifka ee Bursaray Sabameşeler Station. Bursaray [More ...]
Dib u cusboonaysiinta Maqasyada iyo Waddooyinka Xarunta Marshandiz
TCDD 2. Agaasinka Gobolka ee Saldhigga Marşandiz 19 Number of maqasyada iyo Cusboonaysiinta Wadada 2000 Mitari ahaan Natiijooyinka Raadiyaha Jamhuuriyada Turkiga. Agaasinka Adeegga Iibsiga Gobol (TCDD) 2 / 2019 GCC [More ...]
Degmada Diyarbakır ee caasimadda, jidkii hore ee Mardin iyo hawlaha duugoobay ee hore ee Siverek Road ayaa bilaabmay. Inta lagu gudajiro daraasadda, waxaa la dhigi doonaa 5 kun kun oo mitir astaan ​​ah. [More ...]
Guddoomiyaha Gaadiidka Turkiga Mustafa Albayrak, Sivas, oo la xidhiidha tareenka xawaaraha sare leh ee qorshaynaya inuu ka yimaado sannadka 2005 waa arrin xasaasi ah, ayuu yidhi. 2005 ee Rugta Ganacsiga ee Sivas [More ...]
Zeydan Karalar, Duqa Magaalada Adasa Magaalo Weyn, ayaa abaal-marin ku siisay Adana Metropolitan Bas Darawalka Zeliha Elbüken, oo Rakaabkeedii u keentay Isbitaalka wadna istaaga oo nolosha ku soo laabtay. Dhacdada, darawalada baska ayaa sidoo kale taageeray darawalka, [More ...]
Gaadiidka Cusub ee Gordes
Dowladda hoose ee Manisa, xarunta degmada Gördes 3 dhibic cusub ayaa sameysay rakibida joogsiyada. Muwaadiniintu kuma saameeyaan roobka oo qorraxda ayaa la sameeyay si ay u soo jiitaan dareenka muuqaalkeeda casriga ah. Dawlada Hoose ee Manisa, Gördes wadareed [More ...]
Xarunta Tareenka High Speed ​​Speed ​​Train LE ayaa heshay shahaadada LEED Gold, taas oo ah shahaadada ugu sareysa ee dhismaha cagaaran ee caalamka, oo ay abaabulaan Ururka Cagaaran ee Maraykanka (USGBC). Naqshadeynta waxay bilowday 2013 iyo LEED [More ...]
Helikobtarka, oo ay qaadatay Dawladda Hoose ee Magaalada Mersin bishii Abriil ee 2018, ayaa bilaabay inuu u adeego hawlo cusub oo loo adeegsan karo xaddiga tallaabooyinka badbaadinta Duqa Magaalada Seçer. Helikobtarka Dawlada Hoose, hada Hawada Taksi [More ...]
Ururada aan dowliga aheyn ayaa ugu yeeray Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka in ay dib u eegaan go'aanka ku saabsan mashruuca Kocaeli-Istanbul, kaas oo la qorsheeyay in uu ku gudbo kiiloo mitirka 1.7 kiiloow ee Beerta Nabadda ee Ballıkayalar. Sida laga soo xigtay wararka DW Turkiga; TMMOB Rugta Injineerada Deegaanka [More ...]
Bursa degmada Metropolitan, ka leexinayn ee habeyn shaqada ku wajahan kor u qaadidda tayada nolosha muwaadiniinta iyo xalinta dhibaatooyinka ee magaalada waa ugu horeysay ee Magaaleynta Intelligent Turkey 'iyo Waaxda Innovation aasaasay. Magaalaynta Qarsoodiga ah [More ...]
Muwaadiniinta Izmir waxay digniin culus ka heleen ESHOT'tan. Agaasinka Guud ee ESHOT wuxuu qaaday talaabo lagu yareynayo dhaawacyada degmooyinka Alsancak iyo Konak oo ku yaal bartamaha magaalada. BASES ma tagi doonto meelaha ay ku yaalaan Xarunta Magaalada [More ...]